Social Media N'ihi na Social mma | Martech Zone
Tọzdee, Ọktoba 24, 2013 Douglas Karr
Pasent 83 nke ndị America chọrọ ụdị iji kwado ihe kpatara ya na Pasent 41 nke ndị mmadụ zụta ngwaahịa n'aka ụlọ ọrụ n'ihi na ha maara na ụlọ ọrụ ahụ bụ jikọtara ya na ihe kpatara ya. Dika otutu ulo oru na ndi na-abughi ndi mmadu na-abanye n'ime ulo oru ndi mmadu (ngwakọ nke ọrụ ebere na azụmahịa), ọtụtụ na-adabere na mgbasa ozi ọha na eze iji nyere ha aka ịga nke ọma.
Anyị ekekọrịtala ụfọdụ ihe ama dị oke egwu akpata ahịa. m ezi olile anya na ọ bụ nke ga - agbawa ewu ewu - ọkachasị nye nsogbu nsogbu akụ na ụba ụwa anyị na - eche ugbu a.
Ihe omuma ndia na egosi ihe omuma atu ndi a, ma nyekwuo nkwado nkwado maka ụlọ ọrụ ndị na-atụle ịkwaga ụdị azụmahịa nke 'ụlọ ọrụ mmekọrịta'.
Tags: akpata ahịaọrụ ebereabụghị urummekọrịta mmadụ na ibe yaelekọta mmadụ media